Sarimihetsika jerena alohan'ny handehanana any Paris hahalala bebe kokoa ny tanàna | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 09/06/2021 11:49 | kolontsaina, Paris
Raha manontany tena ianao ny amin'ny filma hijerena alohan'ny handehananao any Paris, dia satria mikasa ny hamonjy ny renivohitra frantsay ianao. Tsy hanenenanao ilay antso Tanànan'ny hazavana Izy io dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra eto an-tany. Izy io dia feno tsangambato sy tantara angano izay hahaliana anao, fa izy koa dia tanàna maoderina izay manana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny trano tsy hay hadinoina.
Na izany na tsy izany, sarimihetsika jerena alohan'ny handehanany any Paris fa hanonona teny izahay dia hanome anao fomba fijery hafa momba ny tanànan'ny Seine. Miaraka amin'izy ireo dia azonao atao ny mizaha azy alohan'ny handaozanao ny trano sy hahitanao ireo zoro izay, angamba tsy fantatrao akory hoe nisy. Saingy tsy izao no fotoana itarina, raha tsy misy resaka lavitra intsony, hanome sosokevitra ny horonantsary hijerena izahay alohan'ny handehanana any Paris.
1 Sarimihetsika jerena alohan'ny handehanany any Paris, fitsidihana an-tanàna ny virtoaly
1.2 Marie Antoinette, sarimihetsika hafa hijerena alohan'ny handehanany any Paris hianatra ny tantarany
1.3 Ny ory
1.5 Amelie, kilasika amin'ireo sarimihetsika hijerena alohan'ny handehanany any Paris
1.6 Fiainana mavokely
1.7 Ratatouille, fandraisan'anjaran'ireo sary mihetsika momba ny sarimihetsika alohan'ny handehanany any Paris
Sarimihetsika jerena alohan'ny handehanany any Paris, fitsidihana an-tanàna ny virtoaly
Ny fitsidihanay ny sarimihetsika tsara indrindra napetraka tany Paris dia hitondra anao any amin'ny fotoana lasa izay hahafantaranao ny tantaran'izy ireo, fa koa hatramin'izao, mba ho hitanao hoe iza izy ireo ireo toerana feno fanintona izany dia tsy hita ao amin'ireo mpitarika ny fizahan-tany. Andao handeha miaraka amin'ireo kasety arosontsika.
Katedraly Notre Dame
Miorina amin'ny tantara tsy manam-paharoa Ry Andriambavin'ny paris an'ny lehibe Victor Hugo, sarimihetsika mihoatra ny iray no misy maromaro. Angamba ny malaza indrindra dia ny sary mihetsika novokarin'i Disney tamin'ny taona 1996. Miverina any amin'ny vanim-potoana antenatenany isika hitantara ny tantaran'i Quasimodo sy ilay gipt tsara tarehy Esmeralda, izay tafiditra ao anatin'ny tetika fitiavana, lolom-po ary valifaty.
Izany rehetra izany dia i Notre Dame, ilay fiangonana tandindona indrindra any Paris, ho sehatra afovoany. Raha fintinina, tantara tsara tarehy tsy misy endri-tsoratra ratsy izay naseho tamin'ny efijery imbetsaka.
Raha aleonao mahita kinova misy mpilalao tena izy dia manana ohatra ny moana Ry Andriambavin'ny paris, nanomboka ny taona 1923 ary notarihin'i Wallace Worsley. Ireo mpandika teniny dia Lon chaney toa an'i Quasimodo sy Patsy Ruth Miller ho an'i Esmeralda. Na izany aza, raha mila kinova am-peo ianao, dia ampirisihinay ny sarimihetsika misy an'io lohateny io ihany tamin'ny 1956 miaraka amin'ny Anthony Quinn amin'ny anjara asan'ny hunchback sy Gina Lollobrigida amin'ny maha Esmeralda azy. Amin'ity tranga ity dia ny frantsay Jean Delannoy no lalana.
Marie Antoinette, sarimihetsika hafa jerena alohan'ny handehanana any Paris hianatra ny tantarany
Ny tantaran'ny vady ratsy volo an'i Louis XVI avy any Frantsa efa imbetsaka koa izy no naseho tamin'ny écran be. Izahay dia manolotra ny kinova namboarina tamin'ny 2006 avy amin'i Sofía Coppola miaraka amin'ny lohatenin'ny Marie Antoinette. Na dia mifantoka amin'ny fiainan'ny mpanjakavavy aza izy io dia fomba mahatalanjona ihany koa fantaro ny Paris revolisionera tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX, maro amin'ireo tsangambato no mbola mijoro ary ho hitanao izany amin'ny dianao mankany an-tanàna.
Ny andraikitry ny aristokraty tsy mendrika dia lalaovin'i Kristen dunst, raha ny an'ny vadiny vadiny kosa dia miandraikitra an'i Jason Schwartzman. Ny tarehimarika hafa toa an'i Judy Davis, Rip Torn na Asia Argento dia mamita ny mpilalao sarimihetsika nahazo a Oscar ho an'ny famolavolana akanjo tsara indrindra.
Na izany aza, raha tianao ny sarimihetsika mahazatra kokoa, dia atolotray ilay tamin'ny 1939, mitondra ny lohateny koa Marie Antoinette. Notarihin'i Woodbridge S. Van Dyke, mpandresy Oscars roa ho an'ny Ny sakafo hariva an'ny voampanga y San Francisco. Raha ny mpandika teny, Norma Shearer Izy no nilalao ny mpanjakavavy, raha nilalao an'i Louis XVI kosa i Robert Morley ary i Tyrone Power dia nilalao an'i Axel von Fersen, ilay heverina fa tian'ilay mpanjaka.
Afisy ho an'ny 'Les Misérables'
Miorina amin'ny tantara an-tsokosoko nosoratan'i Victor Hugo, iray amin'ireo mpanoratra naka sary an-tsaina an'i Paris tamin'ny androny, dia matetika no nalefa tamin'ny sarimihetsika sy fahitalavitra. Nisy mozika malaza aza noforonina mifototra amin'ny lalao.
Ny kinova izay entinay eto dia ilay notarihin'i Glenn Jordan tamin'ny taona 1978 ary starring Richard Jordan amin'ny anjara asan'i Jean Valjean, Caroline langrishe tahaka an'i Cosette sy Anthony Perkins toa an'i Javert. Mandritra ilay horonantsary dia ahitantsika ny fizarana amin'ny tantaran'ny Paris toa ny Revolisiona tamin'ny 1830 ary, amin'ny ankapobeny, ny fiainana isan'andro ao an-tanànan'ny Seine tamin'izany fotoana izany.
Na izany aza, raha te hisafidy sary mihetsika ianao dia inona no ho hitanao alohan'ny handehananao any Paris mifototra amin'ny Ny ory kinova hafa, azonao atao ny misafidy ilay navoaka tamin'ny 1958. Amin'ity tranga ity, ny talen'ny dia Jean-Paul Le Chanois sy ireo mpandika teny Jean gabin, Martine Havet sy Bernard Blier.
Safidy fahatelo dia ilay nalaina ho an'ny fahitalavitra ho miniseries an'i Josée Dayan. Nisolo tena an'i Jean Valjean Gérard Depardieu, raha i Cosette kosa nilalao Virginie ledoyen ary Javert avy amin'i John Malkovich.
Raha ny sarimihetsika teo aloha dia nampiseho anao Paris manan-tantara, Moulin Rouge mampahafantatra anao koa ny rivo-piainan'ny tanàna amin'ny faramparan'ny taonjato faha-XNUMX. Ambonin'ny zava-drehetra, ny an'ny manodidina ny kanto ao Montmartre, izay mbola misy ny cabaret malaza manome ny lohateniny an'ilay horonantsary.
Ity sarimihetsika ity dia notarihin'i Baz Luhrmann ary navoaka tamin'ny taona 2001. Mitantara ny tantaran'ny mpanoratra anglisy iray izay nifindra tany an-tanànan'i Seine izy, izay nahasarika azy tamin'ny bohemianism kanto. Ao amin'ny Moulin Rouge no hihaonanao amin'ireo olona tena toa ilay mpanao hosodoko Toondrose Lautrec, fa ilay mpandihy Satine ihany koa, izay ho tiany.
Horonantsary mozika io izay hanome anao fampahalalana tena ilaina ho hitanao ny manodidina an'i Montmartre ary ny zavatra tsy maintsy ho hitanao eo rehefa mankany Paris ianao. Fa manoro hevitra anao ihany koa izahay mba handinika ny feon-kira mahery vaika ao aminy, izay ahitana ny fiakarana lehibe indrindra amin'ny Queen, Elton John o Nirvana.
Amelie, kilasika eo amin'ireo sarimihetsika hijerena alohan'ny handehanany any Paris
Ny kafe roa Mills
Ity sarimihetsika ity, navoaka koa tamin'ny 2001, dia kilalao anisan'ireo tolo-kevitra momba ny sinema hitany alohan'ny handehanana any Paris. Hatsikana tantaram-pitiavana tantanan'i Jean-Pierre Jeunet ary tantanin'i Audrey tato.
Mametraka ny tenany amin'ny kiraron'ny mpandroso sakafo miasa ao izy Ny kafe roa Mills ary mahita tanjona eo amin'ny fiainany izy rehefa manapa-kevitra ny hanampy ny hafa hampifaly azy ireo. Nahazo mari-pankasitrahana César efatra ilay sarimihetsika ary kandidà ho an'ny Oscar maromaro, na dia tsy nahazo izany aza. Fa ambonin'izany rehetra izany dia sarimihetsika manintona izay nahomby tamin'ny besinimaro.
Lavorary koa ny fahalalana Montmartre, toerana misy ny cafe izay iasan'i Amelie. Saingy, tsy toy ny teo aloha, ny manodidina izay hitantsika ao no ilay misy ankehitriny. Raha mandeha any Paris ianao dia mbola afaka misotro ihany koa ao amin'ny Café de Los Dos Molinos.
Edith Piaf mpihira
Raha i Frantsa amin'ny ankapobeny ary i Paris manokana dia manana marika amin'ny tontolon'ny hira dia Edith piaf, izay teraka tao an-tanànan'i Seine. Ity sarimihetsika ity dia mitantara, ny tena marina, ny fiainan'ny mpihira hatramin'ny fahazazany tao amin'ny tanàna mahantra iray tanàna lehibe mandra-pandresen'ny fandreseny eran'izao tontolo izao.
Notarihin'i Olivier Dahan, dia nalahatra izy tamin'ny 2007. Saingy, raha misy zavatra miavaka momba azy, dia ny fahombiazan'ny Marion Cotillard amin'ny andraikitry ny mpihira. Raha ny marina dia azony ilay Oscar ho an'ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra noho ny zava-bitany, ankoatry ny fanekena maro hafa.
Manatevin-daharana azy ao amin'ny mpilalao dia i Gerard Depardieu toa an'i Louis Leplée, mpandraharaha mozika nahita an'i Piaf; Clotilde Courau amin'ny andraikitry ny renin'ity mpanakanto ity sy i Jean-Pierre Martins amin'ny maha mpanao ady totohondry Marcel Cerdan azy, izay nifandray am-pitiavana tamin'ny diva-n'ilay hira.
Ratatouille, fandraisana anjara amin'ny sarimiaina amin'ireo horonantsary hijerena alohan'ny handehanany any Paris
Araka ny fantatrao tsara, efa hatramin'ny am-polony taona maro i Paris no nisehoan'ireo nahandro tsara indrindra eto an-tany. Ity sarimihetsika ity dia mifototra amin'ity, izay hamarananay ny fitsidihantsika ireo horonantsary hijerena alohan'ny handehanantsika any Paris.
Ratsy i Remy izay tonga tao an-tanànan'ny Seine mba hahatanteraka ny nofinofy ho lasa mpahandro lehibe. Mba hanaovana izany dia ampidirina ao amin'ny Trano fisakafoanana ao Gusteau, ny sampiny lehibe. Any izy no hiara-miasa amin'ny mpanasa vilia tsotra mba hamoronana lasopy mahomby indrindra any Paris rehetra. Noho izany manomboka ny Adventures ny mpikiky tokana.
Izany dia sarimihetsika sarimiaina novokarin'i Pixar ary navoaka tamin'ny 2007. Na dia Jan Pinkava aza ny taleny, dia nanao ihany tamin'ny farany Brad Bird ary, ho an'ny dubbing, dia nanana mpilalao sarimihetsika toa an'i Peter O'Toole ary ilay mpanao hatsikana Patton Oswalt. Ary, ankoatry ny loka maro hafa, dia nahazo ny Oscar ho an'ny sarimihetsika sarimihetsika tsara indrindra. Farany mahafinaritra ny fijerin'i skyline avy any Paris izany dia azo jerena amin'ny iray amin'ireo seho misy azy.
Ho famaranana, dia nanolotra ny sasany amin'ny sarimihetsika jerena alohan'ny handehanany any Paris hahafantarana tsara kokoa ny renivohitra frantsay. Na izany aza, maro ny hafa no atolotra. Ohatra, Charade, miaraka amin'i Audrey Hepburn sy Cary Grant mandehandeha eny amoron'ny Seine; Paris, paris, izay manana ny maha izy azy ireo dia mitazona teatra ao an-tanàna hampisehoana mozika na Untouchable, izay mampiseho amintsika ny lanjan'ny finamanana, fa koa ny fahantran'ny mpiara-miasa amin'ny tanàna be asa. Ary, rehefa mandeha ianao, hifindra manodidina ny Tanànan'ny hazavana dia afaka mamaky Ity lahatsoratra ity miaraka amin'ny torohevitray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Paris » Sarimihetsika hijerena alohan'ny handehanany any Paris